Garsoorka Somalia waa Adoo Xun Xoon ku Qaniin! - Ceelhuur Online
Home > Qalinka Qoraaga > Garsoorka Somalia waa Adoo Xun Xoon ku Qaniin!
January 8, 2018 Cali Yare704
Tiirarka Dowladnimo ee Fulinta.Sharci dejinta iyo Garsoorku waa kuwo an kala Maarmin oo Midkood hadii la waayo ay Meesha ka baxayso Nidaamkii Dowladnimo ama ay noqonayso Gacanta Midig oo waysa Bidixdii Adeega la qaban lahayd mana jirto Dowlad Socon karta Garsoor la’an Balse Dalkeena Somalia waxaad moodaa inuusan ka jirin Adeegii Saxda ahaa ee Garsoorka.
Burburkii kadib Dalka Waxaa Shantii Sano ee u danbeeysay Waxaa ku kala Wareegay Dowlado Aduunku Aqoonsaday Maamulkii Xassan Shiikh iyo Kan Hada ee Madaxwayne Farmaajo Waxaana la Yagleelay Dastuur qeexaya Awoodda Garsoorka iyo muhiimadiisa.Intaas Waxaa Dheer Balanqaadyadii Masuuliyiinta Shantii Sano ee u danbeeysay Dalka Hugaaminayay oo Aad ugu dheeraday inay tayay doonaan Garsoorkii Godka ku dhacay ee Somalia Xassan Shiikh ayaa tagay ayadoo uusan jirin Garsoor tago leh halka Farmaajo uu willi Fiirsanayo Tayaxumada iyo dhamaystir la’aanta Garsoorkii Dalka.
Qodobka 114aad ee Dastuurka KMG JFS oo ka hadlaya Madaxbannaanida Garsoorka ayaa qoraya in Garsoorku uu ka madax bannaan yahay laamaha dawladda ee Sharci dejinta iyo fulinta marka ay gudanayaan xilkooda. Xubnaha garsoorku waxay u huggaansamayaan oo keliya sharciga.
Maanta majiro Garsoor ka Madaxbanaan Hay’adahaas oo qaban kara Shaqadii looga fadhiyay Waxaana u Sabab ah inaysaba jirin Maxmaddii ugu Muhiim sanadayd ee Dastuurka oo qaban lahayd ama Dalka ka Gudbin lahayd Marxalado Adag oo jira iyo kuwo Dhici kara
Qodobka 117aad ee Dastuurka dalka oo ka hadlaya Dhismaha Maxkamadda Dastuuka iyo Awoodaheeda Waxaa ku qoran sidaan. (1)In ay Maxkamadda Dastuurku go’aan kama dambays ah ka gaarto sharci ama go’aanno ay gaareen Golaha
fulinta uu ka soo horjeedo Dastuurka, sidaas ku buriso sharcigaas ama go’aankaas aan
(2)Maxkamada waxay awood u leedahay in ay go’aamiso in burinta sharcigaas uu
dhaqangelayo laga soo bilaabo markii go’aanka Maxkamadu dhacay ama waqti
imaandoona oo xaddidan si ay ugu suurogaliso Maxkamada in talaabada ku haboon ay
ka qaadato burinta sharcigaas. Haddii burinta sharcigu u faa’ideynayo qof lagu xukumay
sharcigaas, waxay burintu ka bilaabanaysaa waqtiga go’aanka Maxkamda dastuurigu
(3)Awoodda kama dambaysta ee go’aan looga gaaraayo muranada ka dhaxeeya dowladgoboleedyada
iyo dowlada dhexe ama xukuumadaha dowlad goboleedyada dhexdooda;
awooddaan waxay Maxkamaddu isticmaali kartaa oo keliya ka dib marka wadahadal iyo
wada xaajood lagu xallinwaayoo khilaafka;
(4)Awoodda kama dambaysta ee lagu ansixinayo natiijooyinka aftida iyo doorashooyinka
(5) Go’aannada ay gaarto Maxkamadda Dastuuriga ee la xiriira arrimo Dastuur waa kuwa kamaa dambays ah. Marka aad Isha Mariso Qodobadaan hadana ay meesha ka maqan tahay Maxkamaddii Shaqadaan baqan lahayd Waxaa kuusoo baxaya in aan loo socon Helitaanka Garsoor Hufan.
Maxkamadihii Ka hooseeyay Maxkamadda Dastuurka sida Maxkamadda sare ayaa la sheegaa inay Dhisan yihiin Mase aha kuwo looga Danbeeyo Shaqdooda Hay’ahaa Fulinta.iyo Sharci dejinta ayaana u Muuqda kuwo uu ka shaqayn la yahay Garsoorka taagta daran ee Somalia.
Golaha Shacabku waxay dhowr mar Gaashaanka u Daruureen go’aano dhowr ah oo ay Gaareen Garsoorku sida Maxkamadda sare iyo Xeerilaalintu.Dacdadii u danbeeysay waxay ahayd Markii Wasiiradda Cusub ee uu Dhawaan Magacaaabay Ra’iisul Wasaare Khayre ay Dhaariyeen Gudoomiye Jawaari iyo Guddigiisa Joogtada ah waana Shaqadii Maxkamadda sare. Adoo Xun Xoon Ku Qaniin.!
Inta badan Garsoorka iyo Maxkamadaha Maamul Goboleedyada ayaan shaqayn Waxaana Xabsiyada ka buuxa Maxaabiis Cadaalad waysay.Dhamaystir la’aanta Garsoorka iyo Tayaxumadiisa waxay ka Dhigan tahay in Madaxwayne Farmaajo uu hugaaminayo Dowlad Qabyo ah waxuuse uga Gudbi doonaa Caqabado badan hadii uu dhamaystiro Waqtiga uu talada hayo
W/Q:Ali-yare Abdiwahab Aden
Faallo:Muuqaalka Cusub ee Xasan Daahir Maxuu Xambaarsanyahay?
Al-Shabaab oo Gooyay isgaarsiintii gobolka Waqooyi Bari Kenya
“SAWIRRO”Wasiir juxa si Deg Deg Ah Haloojooji Dagaalka kasocda Hiiraan
June 16, 2017 June 16, 2017 Saadaq Laki
Sawirro: Saxiixa Mataanaynta Bosaso iyo Minneapolis